Jera iye khona ngempumelelo kwi-PT / EXPO CHINA 2017 e Beijing, China.
Jera uye ngempumelelo ttended kwi PT / EXPO CHINA 2017 okwenzekileyo we 27-30 ka Septemba 2017 e Beijing, China.
Enkosi nonke ezityeleleyo owayelapho yethu
Jera uye ngempumelelo ttended kwi PT / EXPO CHINA 2017 okwenzekileyo we 27-30 ka Septemba 2017 e Beijing, China. Enkosi nonke ezityeleleyo owayelapho yethu
Indawo Iziko leMiboniso: The National Convention Centre eBeijing. Booth: Hall E5, umnquba 5618. Website ye Exhibition.
Isifundo lomboniso njengeveki iimveliso zethu eyenziweyo kwaye ababeyinikela
FTTH Fiber optic izincedisi, yolwakhiwo womnatha ngeengcingo kunye internet.
Ukuvalwa Fiber optic Splice (FOSC)
Iibhokisi Fiber optic ukupheliswa (FODB)
FTTH izibopho idrophu ucingo kunye nezilinganisi
Eyenziweyo iimveliso line kunye izincedisi,
band steel stainless zezibonda kunye nezincedisi.
Savuya gqitha kubaxumi ezintsha: China, South Asia, Umzantsi Melika naseYurophu. Sibonga ngokuza. Ithemba sinako wakha ubudlelwane bexesha elide ngokunikela umgangatho siqinisekile ukuba kumaqabane ethu.
Ukuba uya unayo nayiphi na imibuzo - musa ukuthandabuza qhagamshelana nathi.